Kenya: aargoosi uma socono | KEYDMEDIA ONLINE
Kenya: aargoosi uma socono
Oguna oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Kenya aanay marnaba qaadi doonin dhabbe la mid ah kii ay Soomaaliya qaadday.
NAIROBI, Kenya - Dowladda Kenya ayaa jawaab ka bixisay tallaabadii dowladda Soomaliya ay xariirka diblomaasiyadeed ugu jartay Kenya. Afhayeenka xukuumadda Kenya Cyrus Oguna ayaa sheegay in ay dhisi doonaan guddi xal diblomaasiyadeed dhex dhiga Kenya iyo Soomaaliya.
“Waxaannu nahay qaran qab leh, nagama suuragasho in aannu samayno wax la mid ah wixii ay Soomaaliya samaysay, haddii aannu sidaa si la mid ah samayno waxay u muuqanaysaa aargudasho, waxaan xakamaynta arrintan uga dambeyneynaa IGAD iyo Comesa” ayuu yiri Oguna.
Hadalka afhayeenka xukuumadda Kenya ayaa yimi iyada oo saacdihii la soo dhaafay ay dowladda Soomaaliya ku dhawaaqday in gebi ahaanba ay xariirkii diblomaasiyadeed u jartay Kenya iyada oo arrinkaasi u sababeysay faragelin joogto ah oo Kenya ay ku heyso Soomaaliya.
Wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa Wargeyska The Star u sheegtay in aysan helin wax farriin ah oo ku aaddan in dowladda Soomaaliya ay xariirka u jartay Kenya iyada oo intaa ku dartay in wasaarddu aanay arrinkaa eegi doonin inta ay ka heleyso wargelin rasmi ah.
Xariirka labada dal oo baryahaan xumaa ayaa waa kale oo murugsan u baryay kaddib markii Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu Madaxtooyadiisa ku qaabilay hoggaamiyaha Maamulka gooni isu-taagga ah ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi.
Biixi ayaa sidoo kale Nairobi kula kulmay hoggaamiyaha mucaaradka Kenya Rail Odinga.
Dowladda Kenya ayaa u muuqata mid hoos u dhigeysa xariirka ay la leedahay dowladda fFederaalka Soomaaliya taa baddelkeedana soo dhaweysanaysa maamulka iskii isu magacaabay ee Soomaalilaan, arrintaa oo ay Soomaaliya u aragto mid meel ka dhac ku ah madaxbannaanideeda iyo qarannimadeeda.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xalay ku dhawaaqdey in ay xiriirkii diplomaasiyadeed u jartey Kenya.
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Cismaan Dubbe, ayaa Idaacadda Dowladda ka shaaciyay in Dowladda Federaalka ay diblumaasiyiinteeda kala baxeyso Kenya, kuwa Kenyana faray in ay dalkooda u laabtaan.